Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Amerika Latina tamin’ny Aogositra 2015
Amerika Latina · Aogositra, 2015
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Aogositra, 2015
Mpanoratra Luis Carlos Diaz · Venezoela
Tsy misy antra mihitsy ny herisetra ao Venezoela. Na amin'ireo mpampihatra ny lalàna aza, izy ireo izay nanao hetsi-panoherana tao Caracas, na teo aza ny fandraràn'ireo manampahefana sy ny fahanginan'ny media.
Nofoanan'i Ekoatora Ny Vizà (fahazoan-dàlana) Ho An'ilay Frantsay-Breziliana Mpanao Gazety Niharan'ny Herisetra Nandritry Ny Fihetsiketsehana
Mpanoratra Gina Yauri · Ekoatora
"Nitombo ny habibiana atao amin'ireo mpanao gazety, ny media sy ireo mafàna fo ao Ekoatora, ary lasa mateti-pitranga ny famelezana ny fahalalahana maneho hevitra."
Mpanoratra Ángel Carrión · Karaiba
Taorian'ny taona maro nitolomana mafy, afaka manao ny fifanekeny amin'ny fomba ofisialy ireo olona mitovy taovam-pananahana ao Puerto Rico ankehitriny.
Mpanoratra Lupita Peimbert · Afrika Mainty
Mpanoratra Global Voices Latin America · Però
Mpanoratra Mary Aviles · Espaina
Mpanoratra La Pública · Tselatra · Bolivia
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe · Arzantina
Mpanoratra Rhea Page · Shily
Mino aho fa zava-dehibe hoan'ny firenentsika ity tsy fanajana intsony ny fifanaraham-pahanginana taorian'ny taona maro ity. Taloha sy taorian'ny tolona ho an'ny zon'olombelona izany.
Mpanoratra Elaine Diaz · Kiobà
"Na dia misy dia misy aza ny fahasamihafana politika, sambany teo amin'ny fiainako tsy misy ny fahavalo voatondro manokana izay tsy maintsy ivononana iadiana amin'ny fomba rehetra."